ကျွန်ုပ်၏ခွေးသွားများကိုမည်သို့စောင့်ရှောက်ရမည်နည်း Dogs World
ခွေးများအတွက်သွားများသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့မပါဘဲသူတို့သည်အစာကိုကြိတ်။ မရပါ။ ထို့ကြောင့်, သူတို့ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းအောင်ထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည် အားလုံးသူ၏အသက်တာကာလအတွင်း။
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ရှင်းပြဖို့သွားနေကြသည် ငါ့ခွေးသွားကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ သင်၏မိတ်ဆွေသည်ပြီးပြည့်စုံသောသွားများရှိသည်ဟုဝါကြွားနိုင်သည်။
5 သူ့ကိုဆေးစစ်ရန် VET သို့ခေါ်ပါ
ငါတို့ခွေးကိုအဖြူနှင့်ကျန်းမာသောသွားများရရန်သင်သည်များများလုပ်ရန်မလိုပါ၊ ၎င်းကို Barf၊ Yum Diet၊ Naku သို့မဟုတ် Orijen, Acana, Instinct or Taste of Taste ကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့်အစားအစာများကိုသာပေးရမည်။ အခြားသူများအကြားရိုင်း။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၎င်းသည်သဲလွန်စမရှိသောအစားအစာအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည် ခွေးကမျိုချလိုက်တာနဲ့အဲဒါကိုဝါးခိုင်းပြီးအဲဒီလိုလုပ်တာက \_ t သင်၏သွားတို့သည်လည်းခိုင်ခံ့ကြ၏.
သင်ခံစားရုံသာမကသာမကပျော်ရွှင်မှုကိုလည်းခံစားနိုင်သည် သူတို့၏သွားများကိုလည်းခိုင်ခံ့စေ။ ၊။ သင်သည်သူတို့ကိုအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များသို့ရောင်းချရန်ရှာတွေ့နိုင်မည့်သူတို့အတွက်တိကျသောအချက်အလက်များ (သို့) သဘာ ၀ အရိုးများကိုသင်ပေးနိုင်သည်။
ခွေးများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောသွားတိုက်တံနှင့်သွားတိုက်ဆေးများကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ ။
အထူးသဖြင့်ခွေးပေါက်စတွင်သင်၏သားမွေးသည်သူ၏ကိုက်ခြင်းကိုခံနိုင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ကြမ်းတမ်းခက်ထန်သည့်ကစားစရာများလိုအပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်, သူ့ကိုခွေးဝါးပေးသင့်သည်သင်၏အမြဲတမ်းသွားများ၏သွင်ပြင်မှသင်ခံစားရနိုင်သည့်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်နှင့်အလှည့်အားဖြင့်သူတို့ကိုသန့်ရှင်းစေရန်ဖြစ်သည်။
သူ့ကိုဆေးစစ်ရန် VET သို့ခေါ်ပါ
နှစ်ပတ်လည်သုံးသပ်ချက်များ မည်သည့်ပါးစပ်နှင့်ပါးစပ်တွင်းသွားပြproblemနာကိုမဆိုဖော်ထုတ်ပြီးကုသပေးလိမ့်မည် တိရစ္ဆာန်ရှိစေခြင်းငှါအဖြစ်သူတို့ကိုတားဆီးဖို့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » သိချင်စိတ် » ငါ့ခွေးသွားကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ